I-GroupHigh: Cwaninga futhi ulandelele i-Blogger Outreach yakho | Martech Zone
I-GroupHigh: Cwaninga futhi ulandelele i-Blogger Outreach yakho
NgoMsombuluko, Disemba 3, 2018 NgoMgqibelo, Disemba 8, 2018 Douglas Karr
Uzakwabo UChris Abraham ubhale mayelana nesisombululo se-blogger sokufinyelela esibizwa ngeGroupHigh. I-groupHighIpulatifomu eku-inthanethi linikela ngazo zonke izinto ozidingayo ukuze ufinyelele i-blogger.
I-GroupHigh ikuvumela ukuthi uthole ama-blogger kalula emikhankasweni yakho yokufinyelela ngokusebenzisa ukusesha kwabo kwebhulogi lesikhathi sangempela nokuhlunga isikhombimsebenzisi. Idatha ifaka phakathi izihloko, okwenziwa kwasendaweni, imininingwane yebhulogi, ama-akhawunti ezenhlalo, idatha yabalandeli nomlandeli, igunya lokusesha le-organic (elivela eMoz) nezibalo zethrafikhi ezivela ku-Compete.com ne-Alexa. Ipulatifomu ivumela abasebenzisi ukuthi bathole, balandelele futhi babele nama-blogs emikhankasweni. Ungakha futhi uhlu lwe-blogger ngokungenisa ama-URL kusuka kuma-spreadsheet.
Ukuhlanganiswa kwethrafikhi kufaka izivakashi zebhulogi zanyanga zonke, ukubukwa kwamakhasi, namakhasi ngokuvakashelwa ngakunye. Futhi, uzobona amamethrikhi wokuzibandakanya kwezenhlalo ku-Twitter, Facebook, Youtube, Google+, LinkedIn, Pinterest, naku-Instagram nokuthi banamandla kangakanani ama-blogger esiteshini ngasinye sezokuxhumana.
Ingxenye yokuphathwa kobudlelwano beGroupHigh yenza kube lula ukwakha ubudlelwano obusha, ukugcina obukhona, ukulandelela lobo budlelwano, nokusebenzisana njengeqembu emizamweni yakho yokufinyelela:
Ukulandelela i-imeyili - Bona ukuthi ugcine nini ukuxhumana nama-blogger akho.
Imininingwane Yokuxhumana - Yenza ukuxhumana kwakho kube ngokwakho ngokugcina imininingwane yokuxhumana koxhumana nabo be-blogger yakho.
Ukusebenzisana kwabasebenzisi abaningi - Buka futhi uhlele umlando womsebenzi kulo lonke iqembu lakho noma iminyango eminingi.
Izikhumbuzi Zokulandelela - Hlala uthinta ama-blogger wakho bese ulandelela lokhu kuhlangana.
Nika ama-Blogger - Ukusebenza njengeqembu? Nikeza ama-blogger kwilungu leqembu ukuthi akhe iphuzu elilodwa lokuxhumana futhi aqede ubungozi babantu abaningi abafaka i-blogger efanayo.
Buka futhi useshe okuthunyelwe kwakamuva kwebhulogi ngaphandle kokushiya uhlelo lweGroupHigh. Okuthunyelwe okubhekiswe kubhukhimakhi ukuze kuthi lapho kufika isikhathi sokufaka iphimbo ungabhekisa kokuthunyelwe okuthile. Jwayela ukuthi ibhulogi isebenze kanjani nezinhlelo zokumaketha esikhathini esidlule ngokubuka ukuthi ngabe bathathe okuthunyelwe kwezivakashi noma babamba iqhaza ekubuyekezweni komkhiqizo noma ekunikezelweni. Ungabhukumaka amabhulogi nokuthunyelwe kusuka kunoma yikuphi ohlwini lwakho lwe-GroupHigh.
Ukuvuselelwa okusha Kufaka phakathi:
Izinhlelo zenyanga nenyanga
Amandla okusesha aqinile ezigidini zabathonya, ama-blogger nezitolo zeMedia.
Ukutholwa kwe-Backlink kukho konke okuthunyelwe
Ukusesha kokuqukethwe kokuthunyelwe okuyizigidi ezingama-80
Ukungeniswa kwanoma yiluphi uhlu lwe-url locwaningo olusheshayo
Ukuzibandakanya ku-Instagram, Youtube naku-Twitter
Ama-Metrics angaphezu kwama-45 azokhonjiswa futhi ahlungwe kuhlu
Ukuhlunga izinhlobo ezingaphezu kwezingu-24 zemidiya
Imininingwane eqinile yokuhlela kanye nemininingwane yokuxhumana yawo wonke amarekhodi
Amamethrikhi wokubandakanya okuqukethwe, ukulandelela nokubika
Ukusabalala emhlabeni wonke ngezilimi ezingama-26
Tags: ukufinyelela kwe-bloggeruchris abrahamthola ama-bloggerthola abathonyabandlaAbathonyaukufinyelela
Indlela Isizinda Esikhohlakele Esingene Ngayo Sathola Isizinda Sami Esisenkingeni Ngayo ne-Google!